Chishanu, December 4, 2015 Chishanu, December 4, 2015 Douglas Karr
Imwe yemakambani iyi yaive neplatifomu apo kuchengetwa kwevatengi kwaive kwakasungirirwa zvakananga nekushandisa kwavo chikuva. Zvichitaurwa zviri nyore, vatengi vaiishandisa vakave nekubudirira kukuru. Vatengi vakanetseka vakabva. Izvo hazvishamise nechero chigadzirwa kana sevhisi. Nekuda kweizvozvo, isu takagadzira onboarding akateedzana emaema ayo ese ari maviri akadzidzisa uye nekumanikidza mutengi kuti atange kushandiswa kwepuratifomu. Isu takavapa maitiro-kumavhidhiyo pamwe ne
Vhiki rino ndakasangana nekambani yanga ichifunga zvekusiya yavo email service provider uye kuvaka yavo email system mukati. Kana iwe ukandibvunza makore gumi apfuura kana iri yaive zano rakanaka, ndingadai ndakati kwete. Nekudaro, nguva dzashanduka, uye tekinoroji yeESPNs iri nyore nyore kuita kana iwe uchiziva zvauri kuita. Ndosaka takagadzira CircuPress. Chii Chashanduka neemail Service Vapi? Shanduko huru ne
Chitatu, November 20, 2013 Chitatu, November 20, 2013 Douglas Karr
Emails anowanzo shandiswa kushambadzira kushambadzira uye ari mese-kune-mazhinji meseji. Mukati meindasitiri, izvi zvinonyatsozivikanwa se batch uye blast. Nguva yacho ndeyemutumi. Yakakonzerwa email inosiyana, kusanganisa iyo tsika template uye mushandisi dhata kutumira email email kana chaicho chiitiko chikaitika. Chiitiko chinokonzeresa iyo email. Maimeri anotambirwa anotumirwa zvakananga kuburikidza neshure sisitimu kana kushandisa yeemail service provider kazhinji kuburikidza nekubatanidzwa kweAPI. Vamwe
Chishanu, January 25, 2013 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Kubatanidzwa kuri kuve chinhu chakakosha zvakadaro mukutengesa uye kushambadzira maitiro zvekuti avhareji chirongwa cheemail hachingokwani. Vanhu vakaita seRight On Interactive vatora yavo yekushambadzira otomatiki sisitimu uye vakavaka yavo yega email chikuva zvakananga mairi saka haufanire kutenga kana kusanganisa uye ESP. Izvo hazvina kuoma kuita chaizvo. Paakagumburwa nekukanganisa kwemasevhisi eemail, Adam Mudiki akashandisa yakavhurwa sosi yekutumira tsamba vamiririri (MTA)